Kulan lagaga Hadlayay Mashaariicaha MDG. - Cakaara News
Kulan lagaga Hadlayay Mashaariicaha MDG.
Jigjiga (cakaaranews) Axad 10ka July 10, 2016 Kulan balaadhan oo lagaga hadlayay dar dargalinta mashaariicaha horumarka waara ee MDG ayaa ka dhacay hoolka shirarka ee kuliyada maaraynta iyo adeega shacabka DDSI.
Kulankaasi oo uu hogaaminayay wasiirka waraabka iyo horumarinta dooxooyinka DDSI ahna gudoomiye ku xigeenka gudiga mashaariicaha MDG mudane Suldaan Khayre waxaana loo qaytay dhamaanba masuuliyiinta iyo shaqaalaha wakaaladaha DDSI.
Waxaana furitaankii kulankaasi ugu horayntii ka hadlay wasiirka waraabka iyo horumarinta dooxooyinka DDSI mudane Suldaan Khayre oo sheegay in ujeedada kulankani tahay sidii looga wada hadli lahaa fulinta iyo dar dargalinta mashaariicaha horumarka waara MDG ee ay wakaaladaha DDSI gacanta ku yahaan fulintooda gaar ahaan mashaariicaha sanad miisaaniyeedka 2009TI.
Waxaa kale oo uu sheegay wasiirku in mudada uu kulanku socdo lagaga hadli doono fulunta iyo hirgalinta qorshihii sanad miisaaniyeedkhii hore ee 2008TI ee ay wakaaladuhu gacanta ku hayeen fulintooda si qorshaha 2009TI loogu darsado hadii ay wax gol daloola ah ka jirtay fulinta qorshahaasi hore ee mashaariicaha horumarka waara.